Free Mobile Na-anabata Email Ndebiri site Litmus | Martech Zone
Anyị na onye ahịa na-arụ ọrụ ugbu a ozi ịntanetị e-commerce anaghị azaghachi ugbu a. Anyị enweghị obi abụọ ọ bụla na ha na-efunahụ clicks na mgbanwe n'ihi oke mgbanwe omume nke ndị debanyere aha na-agagharị na ekwentị.
60 %% nke email niile ezitere ka emepere na ngwaọrụ mkpanaka.
You nwere ike ịghọtaworị mmeghachi omume na-anabata - isi koodu ntanetị weebụ nke na-agbanwe nhazi nke saịtị gị iji hụ na kachasị maka ihuenyo na mkpebi a na-egosipụta ya. Ebe ọ bụ na ọ bụ naanị ihe nchọgharị ole na ole na ọtụtụ n’ime ha na-arụ ọrụ n’ozi ịntanetị, iwulite ibe weebụ na-anabata anaghị adịkwa mfe. Agbanyeghị, mgbe ịkwagara email, ọ na-esikwu ike karịa.
Ndị ahịa email nwere nnukwu ọdịiche na styling na koodu ha na-akwado. Na ịhụ na email gị na-anabata ekwentị mkpanaaka na-agbakwunye nnukwu mgbagwoju anya. Litmus bu ngwa oru nye nwalee ma lelee imepụta email gị n'ofe sistemụ arụmọrụ na ndị ahịa email.
Litmus na-ewere usoro ndu ha na ụlọ ọrụ ahụ n'ihu ugbu a, na-enye ndebiri ozi nnabata n'efu na ibe ha. Ngwaahịa wepụta ndebiri email, ndebiri email e-commerce, ndebiri email njikwa akaụntụ, na ndebiri email ahịa dị maka nbudata!
Mwepụta Ngwaahịa Na-azaghachi Ndebiri Email:
Ọhụụ: Usernye Nnabata
Ọhụụ: Na-abịa n'isi nso
Ọhụụ: erylọ ọrụ
E-Commerce na-azaghachi Email ndebiri efu:
Beretun: ụgbọ ibu azụmahịa
Beretun: daybọchị ọmụmụ
Beretun: erylọ ọrụ ụlọ
Beretun: Akaụntụ Ekepụtara
Beretun: ịtụ ahịa
Free Akaụntụ Akaụntụ Na-aza Ndebiri Email:
Ceej: Akaụntụ Mmelite
Ceej: Akaụntụ Ọhụrụ
Ceej: Kaadị kubie ume
Ceej: Akaụntụ mechiri emechi
Lee: Paswọdu Tọgharia
Free Na-anabata Ahịa Email Ndepụta:
Pook: Akwụkwọ Akụkọ
Pook: Nkwupụta ngwaahịa
Pook: Omume Inkù
Pook: Ahịa Kupọn
Pook: blọgụ blọgụ
Pook: ụlọ ọrụ
Nke a bụ nnukwu nchịkọta ndebiri ndebiri email na ihe ndị ọzọ!
Ele niile anabata Email ndebiri
Tags: ozi ịntanetị njikwa akaụntụnjikwa akaụntụ na-anabata ndebiri emailecommerce email ndebiriecommerce na-anabata ndebiri emailemail ndebirifree ndebiri emailfree na-anabata email ndebirilitmusemail ndebiri ahịaemail na-anabata ndebiri ndebiringwaahịa mwepụta email ndebiriozi ịwepụta ngwaahịa